Muqdisho iyo gobolada qaar oo si ku talagal looga gooyey Internet-ka ‘caddeeyn’ | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Muqdisho iyo gobolada qaar oo si ku talagal looga gooyey Internet-ka ‘caddeeyn’
Muqdisho iyo gobolada qaar oo si ku talagal looga gooyey Internet-ka ‘caddeeyn’
Joojinta internetka ayaa imanaya maalin uun kadib markii baarlamaanka Soomaaliya ay kalsoonida kala noqdeen ra’iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre. Dalalka ugu waaweyn ee taageera Soomaaliya sida Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa labaduba dhalleeceeyay tallaabada xilka looga qaaday ra’isulwasaarihii hore, iyagoona ku tilmaamay mid aan waxtar u laheyn hanaanka horumarka iyo xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya.
Netblocks ayaa sheegaya in falanqayn horudhac ah oo ay sameeyeen ay muujinayso in internetka la jaray isla markaasna go’itaanka internetka uusan ka dhalan shil, iyagoo tilmaamay in adeegga la jaray uu u muuqdo mid ula kac ah.”Dhacdadani waxay leedahay saameyn heer qaran ah, waxayna sidoo kale u muuqataa mid si ula kac ah u dhacday, maqnaanshiyaha internet ma ahan dhacdo caalamka intiisa kale ka jirta, mana ahan arrin ka dhalatay farsamo ama weerar dhanka internetka ah.”
Xayiraadda qadka internetka ma ahan mid ku cusub Africa. Inta badan dalal ku yaala qaaradda Afrika, ayay mas’uuliyiin badan hore u hakiyeen adeegsiga internetka intii lagu guda jiray xaaladdo degdeg ah, mudaaharaadyo dowladdo looga soo horjeeday ama xiliyada ay socdaaan imtixaannadda qaran.